Ahoana ny fomba hifehezana ny rakitra PST Outlook?
Home Products DataNumen Outlook Repair Ahoana ny fomba hifehezana ny rakitra PST Outlook?
0.02 / 5 (avy amin'ny vato 1,612)
Ho lasa lehibe ny rakitra Outlook PST rehefa avy nampiasaina nandritra ny fotoana elaela. Raha ny marina dia azo atao ny mampihena ny habeny amin'ny alàlan'ny fametahana azy na amin'ny fametahana azy. Misy fomba roa hanaovana an'izany:
1. Mampiasà endrika "Compact" ao amin'ny Outlook:
Ity no fomba ofisialy handrafetana rakitra PST lehibe, toy izao (Outlook 2010):
Tsindrio ny File vakizoro.
Tsindrio Tefin'ny kaonty, ary tsindrio avy eo Tefin'ny kaonty.
Ao amin'ny Files data vakizoro, kitiho ny rakitra data tianao hasiana fitehirizana ary kitiho Settings.
Tsindrio Compact izao.
Avy eo i Outlook dia start ampifanaraho ny rakitra PST.
Ity no dingana ho an'ny Outlook 2010. Ho an'ireo kinova Outlook hafa dia misy fiasa mitovy amin'izany. Ny hetsika "Compact" ofisialy dia hanafoana ny habaka ampiasain'ny entana voafafa maharitra sy ireo entana hafa tsy ampiasaina. Na izany aza, miadana be io fomba io rehefa lehibe ny fisie PST.
2. Ampifanaraho amin'ny tanana ny rakitra PST:
Raha ny tena izy dia azonao atao ny mametaka rakitra PST amin'ny alalanao, toy izao:
Mamorona rakitra PST vaovao.
Adikao ny atiny rehetra ao amin'ilay rakitra PST tany am-boalohany ao amin'ilay fisie PST vaovao.
Aorian'ny fandefasana kopia, ny rakitra PST vaovao dia a voafintina kinovan'ny fisie PST tany am-boalohany, satria ireo zavatra voafafa maharitra sy ireo zavatra hafa tsy ampiasaina dia tsy hadika.
Miorina amin'ny fitsapana anay, ny fomba faharoa dia haingana kokoa noho ny fomba 1, indrindra rehefa lehibe ny haben'ny rakitra PST. Mamporisika anao izahay hampiasa an'io fomba io mba hamenoana ireo rakitra PST malalanao.